🥇 ▷ Hiigsiga cusub ee loo yaqaan 'Uncharted' iyo 'Apex Legends' ayaa ah kuwa kale ✅
Hiigsiga cusub ee loo yaqaan ‘Uncharted’ iyo ‘Apex Legends’ ayaa ah kuwa kale
Microsoft kaliya ma aysan helin daraasado sanadkii la soo dhaafay, waxay sidoo kale abuureen ‘The Initiative’, istuudiyaha ugu horeeya ee xisbiga, kaasoo Markuu waqtigu sii socdo, waxay leedahay soo-saareyaal aad u tiro badan oo heerar khibrad ku leh warshadaha. Tan iyo markii la aasaasay, istuudiyaha ugu da’da yar uguna khibradda badan ee isku-xidha Xbox Game Studios ayaa shaqaalaysiinaya shaqaale aad u tiro badan, isla markaana sameeyey taxanayaal badan oo heer sare ah, oo isku urursaday karti-xirfadeedka PlayStation, sida qaar ka mid ah kuwa horumariya dagaalka, kuwa kale ee Insomniac, Rockstar iyo qaar kaloo badan.
Hadda, marka loo eego cusboonaysiinta muuqaalka ee LinkedIn (oo loo maro VGC), istuudiyaha ku saleysan Santa Monica ayaa shaqaaleysiiyay afar qof oo dheeri ah Waxay ka shaqeeyeen qaar ka mid ah cayaaraha muhiimka ah waqtiyadii la soo dhaafay. Sean Slayback wuxuu ku biiray sidii naqshadeeye Nidaamiyaha Maamulaha, Ryan Duffin wuxuu ku soo biirey sida Director of Animation Director, Ryan Trowbridge wuxuu ku biirayaa Director Farshaxanka Farshaxanka, halka Justin Walters uu ku biirey Senior Artist Deegaanka.
Slayback wuxuu hore u ahaa nashqadeeyaha ciyaaraha sare ee Respawn Entertainment, oo wuxuu ku shaqeeyay awoodiisa A Legx Legends, sidoo kale wuxuu sidoo kale ka shaqeeyey dhowr cinwaan oo Wicitaan oo loogu magac daray Treyarch iyo Infinity Ward kahor taas. Duffin wuxuu horey ugu jiray bioWare wuxuuna ka shaqeeyey animations Anthem, inta uusan ka shaqeynin Battlefield 5 ee DICE.
Trowbridge wuxuu si toos ah uga midoobay SIE Bend Studio, halkaasoo uu ka shaqeeyey Maalmaha Gone, oo uu ka soo shaqeeyey Naughty Dog in Uncharted 4. Ugu dambeyntii, Walters wuxuu ku biirayaa Avalanche Studios, halkaasoo uu ka shaqeeyey Just Cause 4, halka mashruucyadiisi hore ay sidoo kale ku jiraan jilaayaal ay ka mid yihiin DOOM, Middle-Earth: Shadow of Mordor, Halo: Master Chief Collection, Call of Duty: Dagaalkii Casriga ahaa ee Dib Looga Baxay, iyo inbadan.
Waxqabadka Wuxuu keenayaa hibo aad u weyn, oo wuxuu ku sameeyaa xawaare deg deg ah oo joogto ah, marka waxaa xiiso yeelan doonta in la arko waxa ay ka shaqeynayaan, in kasta oo ay u badan tahay in muddo ah ka hor inta aannaan maqal ama arag wax la taaban karo oo ku saabsan mashruucan, in kasta oo ay jirto isugeynta badan ee Developers ee daraasadaha kale. Dhawaan, Tababaraha Xbox Phil Spencer wuxuu sheegay in mustaqbalka Xbox uu marayo kulamadii ugu horreeyay ee xisbiyada, waxayna umuuqataa in barnaamijka ‘Initiative’ uu noqon doono mid ka mid ah istuudiyaha ka shaqeynaya sidii tan looga dhigi lahaa mid dhab ah.